Suuqa Ciyaaraha: Muuqaalka Ganacsiga 2021-2026 Qoraa: | Adidas, Nike, Puma, yunifoomka, ASICS, Columbia, The North Face, Patagonia, Burton, prairie ey, montbert, Woer Kang, Mareykanka iyo As ...
Warbixinta "Suuqa Ciyaaraha Isboortiga", oo ka kooban daraasad dhameystiran, ayaa ka sarreysay heerka ballaarinta suuqa intii lagu jiray muddadii saadaasha. Si loo bixiyo aragti guud oo deg deg ah, warbixinta waxaa ku jira cabirka iyo qiyaasaha suuqa dharka isboortiga adduunka inta lagu jiro xilliga saadaasha. Addi ...
Aragtida mustaqbalka ee tirade kororka warshadaha suuqa baseball-ka ee tirakoobka kobaca sannadka 2020 Nike, Adidas, Under Armor, Puma
"Warbixinta Cilmi-baarista Suuqa Ciyaaraha Isboortiga Caalamiga ah" waxay bixisaa aragtiyo qiimo leh oo ku saabsan isbeddellada hadda jira iyo kuwa ka iman kara warshadaha, si akhristayaashu u yeeshaan faham buuxa oo ku saabsan alaabada suuqa, ugana caawiyaan inay aqoonsadaan fursadaha maalgashi ee rajada leh iyo kuwa kale ee ...
sis Malaika Arora ayaa Amrita u ogolaatay inay sameyso yoga dharka hoose ee isboortiga iyo dharka gaagaaban
Amrita Arora iyo walaasheed Malaika Arora ayaa ah kuwa jirdhis ku sameeya, taasi ma beenineyso. Kahor intaan cudurku bilaabmin, jimicsi adag kadib, labada gabdhood ee walaalaha ah waxaa badanaa laga helay banaanka garoonka. Xitaa intii lagu gudajiray aafada, labada nin ma aysan joojin jimicsiga, Amrita-na Instagram-kii ugu dambeeyay ...
Milkiilaha ganacsiga yar wuxuu abuuraa dabaasha iyo dharka isboortiga
Milkiilaha meheradaha yar yar ee u dhashay Venezuela Marialexandra Garcia waxay ku nooshahay Palmetto Bay (Palmetto Bay) waxayna aasaastay dabaasha iyo dharka isboortiga ee Outplay Gender. Muuqaalka ayaa ah nooca lagu dabaasho iyo dharka isboortiga oo hadafkeedu yahay in loo abuuro dhar “shakhsiyaadka aan ku qanacsaneyn dhaqanka caadiga ah ...
Faa'iidooyinka jireed ee yoga barkadda dabaasha ayaa aad uga badan qabowga qorraxda xagaaga
Yoga ma laha sharciyo adag. Ujeeddada jimicsiga oo dhan ayaa ah in jirkaaga laga dhigo mid wanaagsan - ku darista barkad isla'egta ah kuma caawin karto oo keliya inaad qaboojiso kuleylka xagaaga, laakiin sidoo kale wax badan samee. “Pool Yoga waxay ka faa’iideysaneysaa iska caabbinta iyo dabeecadda biyaha ee biyihii si ay u sameysato qoondo ...
Qalinjabiyeyaasha RHONY Kelly Bensimon waxay ku muujinayaan jirkiisa jilicsan dharka isboortiga iyo gaagaaban isagoo ku ordaya magaalada New York
Xiddiga dhabta ah ee 52-sano jirka ah wuxuu u muuqdaa mid ku habboon dharka isboortiga oo leh bra madow isboorti iyo gaaban. Jogging City: Isniintii, Kelly Bensimon waxay muujisay jir-dhiseheeda caanka ah iyadoo ku orodaysa Manhattan Waxay ku mashquulsanayd orod, iyadoo Apple Airpods ay dhegeheeda ku dhex qarsoon tahay timaheeda dahabka ah ee buluugga ah.
Lululemon Luglemon ugu fiican ee loogu talagalay Yoga, Orod & Dheeraad
Us Usbuucle wuxuu leeyahay iskaashi gacansaar ah sidaa darteed waxaa suuragal ah inaan helno magdhow qaar ka mid ah xiriidhada alaabada iyo adeegyada. Waanu ku qanacsanahay qof kasta oo ku dhaca waxyaabo ay jecel yihiin - xitaa haddii ay tahay lebbis fudud oo fudud! Fursadaha ayaa ah, inaad qaadatay qamaarka oo aad soo iibsatay labo kabood oo Lululemon ah, ama l ...
Shaqsi shaqsiyadeed oo aan jeclahay ayaa ah lebbiska 'Spacedye' Beyond Yoga
Shay kasta oo boggan ku yaal waxaa xushay tifaftiraha ELLE. Waxaan ku kasban karnaa komishanka qaar ka mid ah waxyaabaha aad doorato inaad iibsato. Xaqiiqdii, xirmooyinka yoga waxaa loo sameeyay yoga dhab ah, laakiin surwaalka fidsan ayaa sidoo kale ku habboon kuwa sameeya ugu yaraan ugu yaraan. Waxay si fiican u koobayaan qaab nololeedkeena hadda ee wareejinta qamaarka ...
Dharka Shaqada Ugu Fiican Haweenka: Codadka Dibadda, Alogear Yoga iyo inbadan
CNN Underscored waa hagahaaga alaabooyinka iyo adeegyada maalinlaha ah ee kaa caawinaya inaad ku noolaato nolol caqli badan, fudud oo qancisa. Mawduucan waxaa abuuray CNN Underscored. Shaqaalaha CNN News kuma lug laha. Markaad wax iibsaneyso, waxaan helnaa dakhli. Waqti dheer ayaa dhaafay maalmaha ka shaqeynta bacda ...